एसईओ उपकरण र युक्तिहरु संग मेरो व्यापार को सबै भन्दा बाहिर कसरि बनाउन को लागि?
यी दिनहरू, सबैभन्दा ठूलो मात्रामा कम्पनीले खोजी इन्जिन अनुकूलनको आधारभूत अवधारणालाई बुझाउँदछ र यसको अनौठो कुरा पनि बुझ्दछ. यद्यपि, तिनीहरू सबैलाई SEO प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन. जब यो विजेता एसईओ रणनीति निर्माण गर्न आउँदछ, अधिकतर अनलाइन व्यापारीहरू थाहा छैन जहाँ सुरू गर्न सकिन्छ. को रूप मा खोज इन्जिन अनुकूलन सफलता को कुशलतापूर्वक काम गर्ने क्षमता मा निर्भर गर्दछ, तपाईंलाई केहि हैक्स कि तपाईंलाई मदद मिलेगी कि तपाईंको एसईओ विचारहरु को वास्तविकता मा अवशोषित गर्न को आवश्यकता हो.
एक प्रभावी एसईओ बनाउन को लागी, तपाईंलाई हात मा कार्य संग अविश्वसनीय रूप देखि कुशल हुनु पर्छ. यदि तपाईं निरन्तर बिना योजना बिना नियन्त्रित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रमा गहिरो जाने सक्षम हुनुहुने छैन - autopesula tallinn harju. यसैले तपाईंलाई समर्थन उपकरणहरू र लिपिहरू मूल्य गर्न आवश्यक छ. यस लेखमा, हामी कुशल एसईओ उपकरणहरू र सुझावहरू जुन नजिकका अनुकूलन उत्पादकता निर्गत अधिकतम गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ.
Google Analytics स्प्रिेडसिट ऐड-अन
कुशलतापूर्वक कार्य गर्न सक्षम हुनुको लागि, तपाईंलाई स्वचालित रूपमा Google Analytics डेटा निकाल्न र रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ।. वेबसाइट मालिकहरू र एसईओ विशेषज्ञहरू नियमित रूपमा मासिक रिपोर्ट सञ्चालन गर्छन्. यो सबैभन्दा दोहोरो दोहोरो कार्य हो जसले धेरै समय लिन्छ. सामान्यतया, विशेषज्ञहरूले Google Analytics बाट सबै आवश्यक डेटा निकाल्न दिन वा धेरै बढी खर्च गर्छन्.
विश्लेषकत्मक रिपोर्टमा गल्ती गर्दा उनीहरुले धेरै सावधान रहनु आवश्यक छ किनकि विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरुमा गल्तीहरूले उनीहरूको वेबसाइट प्रतिष्ठा खर्च गर्न सक्छन्. यसैले वेबमास्टर्सहरूले सधैँ खण्डहरू जाँच गर्छन् तिनीहरू आवेदन र मेट्रिक्समा उनीहरूको विश्लेषण गर्छन्. यो कामको यो भाग स्वचालित गर्न यो स्मार्ट छ किनकी यसले तपाईंलाई धेरै समय बचत गर्न रिपोर्टहरू मा गल्तिहरु लाई समाप्त गर्न मद्दत गर्दछ. सबै मा, तपाईंको विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू पानाहरूको लागि Google Analytics एड-अनको साथ अर्को तहमा लिन सकिन्छ. तपाईंको गुगल एनालिटिक्समा यो उपयोगी विस्तार थप्दा, तपाईं डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स एपिआइ बाट सिध्याउन सक्नुहुनेछ. सुरुवात चरणमा, तपाईंलाई कन्फिगर गर्न आवश्यक छ कुन विश्लेषणात्मक डाटा खींच्नु पर्छ. दोस्रो चरणमा, तपाईं स्वत: रिपोर्ट चलाउन सक्नुहुनेछ. यस रिपोर्टिङ ढाँचाले तपाईंलाई GA बाट डेटा एकत्रित गर्न समय कम गर्न मद्दत गर्नेछ.
सेल्टल्ट ओटो एसईओ
कुनै पनि विजेता खोज इन्जिन अनुकूलन रणनीतिहरु खोजशब्द अनुसन्धान को प्रक्रिया देखि बचन सक्छ. गुणवत्ता र सान्दर्भिक खोज सर्तहरू कुनै पनि अप्टिमाइजेसन अभियानको मूलमा रहेको छ भने, तपाईंलाई आफ्नो बजार आला र प्रतिस्पर्धी विश्लेषणको व्यापक अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।. यस प्रक्रियालाई सरल बनाउन र लक्षित कुञ्जी वाक्यांशहरूको गुणस्तर बढाउन, तपाइँलाई विशेष कीवर्ड शोध उपकरणहरू जस्तै Google Keyword Planner र Semalt Auto SEO उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ।. अन्तिमले तपाइँलाई सबै विद्यमान त्रुटिहरू हटाउन स्वचालित वेबसाइट विश्लेषण सञ्चालन गर्न मद्दत गर्न सक्छ. यसबाहेक, यो उपकरणले तपाइँको बजार आला विश्लेषणमा आधारित तपाईंको उच्चतम आवाज र उद्योगको मुख्य वाक्यांशहरूको सट्टा चयन गर्ने मौका दिन्छ.
अर्ल्ल्ट ओटो एसईओ धेरै प्रयोगकर्ताको अनुकूल उपकरण हो, र यो कसरी प्रणालीले काम गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन धेरै मिनेट लाग्छ।. जब तपाईं प्रणालीसँग दर्ता गर्नुहुन्छ तुरुन्तै, वेबसाइट विश्लेषकले तपाईंको साइट पत्राचारको सन्दर्भमा अवस्थित खोजी इन्जिन मापदण्डको साथ छोटो रिपोर्ट दिन्छ. त्यस पछि, एक प्रणालीले तपाईंको साइटमा अवस्थित त्रुटिहरूको सूची प्रदान गर्नेछ. यसबाहेक, एसईओ-इन्जिनियरले तपाइँलाई तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्न सहयोग पुर्याउन ट्राफिक-उत्पन्न र सान्दर्भिक किबोर्डहरूको सूची बनाउनेछ. यी उपकरणहरू आला सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा प्राकृतिक लिङ्क निर्माण पनि गर्दछ. यो एक अनूठो सामग्री उत्पादनको साथ आउँछ जुन जटिलमा विजेता परिणाम प्रदान गर्दछ. लिंक इमारत धीरे-धीरे अनुपात अनुसार प्रदर्शन गरिएको छ: 40% - लंगर लिङ्कहरू, 50% - गैर एंकर लिङ्कहरू र 10% - ब्रान्ड नाम लिङ्कहरू.